Digital Marketing Tips Kubva kuSemalt Kuwedzera Mapato MuHotel yako
Kugadzirwa kwekugamuchira vaenzi kunobatsira vatengi vane ruzivo rwakasiyana nezvinodiwa.Vakawanda vanotengesa mumabhizimisi vanotarisana nematambudziko akaoma vachiedza kuongorora zvinyorwa zvitsva kana mazwi emhando dzakadai se "zvigadzirwa zvekutengesa" kana "makuru makuru".Inokonzera hoteliers kuti iite nzira dzakakosha uye pamusoro pekufunga kushambadzira bhajeti pavanenge vachishandisa mushandi wekugadzirira kupindurafoni. Izvo hazvina kunaka, uye vashandi vanogona kudzokera kune zvidzidzo nekuisa pfungwa kune izvo zvinokosha-vashanyi - business support service providers.
Dzokera kune zvakakosha zvekutengeserana, zvakapiwanaAndrew Dyhan, Mutengi weKuteresi Achibudirira we Semalt .
Kuvandudza pahutano hwekubhuka hwevaeni.
Chinonyanya kukosha pakukutengesa kamuri yehotera ndechiitiko chekubhuka kwevatenzi.Maererano neStatistic Brain, 58% yekubhuka kwehotera inoitika paIndaneti. Iyo inhamba yakawanda. Nzvimbo yepaiti yepaiti yepaiti yepaiti inokoshazvimwe zvekutsvaga muIndaneti. Zvinoshamisa kuti mahotera akawanda emahombekombe epamba anowanzo kufamba uye anoita kuti vaenzi vashande zvakaomabhuku kamuri. Vanhu havafaniri kuvhara pa "zvigadzirwa" kana kuti "pokugara" uye kumirira kwemaawa mapeji asati agadzirisa. Uyezve, anhotera yakakodzera yepaiti inofanira kunge ine zvikamu apo muenzi anogona kupona uye kuwana ruzivo rwakakosha asati agadzirisa mapeji. Vashanyivangada kuwona makamuri, kuongororwa, zvipupuriro nekuchengetedza bhokisi. Kutevedzera sangano rakanaka reSEO kunogona kubatsira kuvandudza chiitiko ichi.
Dzidza chokwadi pamusoro peSEO muhurumende yekutambira.
Hotels ndevamwe vekutanga vanotora mabasa eSeO kubvira muna 2004. Kare kare,nzvimbo yehotera ingangokwanisa kuisa mazwi makuru mukati mematekisi asina kuonekwa pamusha wekutanga uye injini dzekutsvaga seGoogle dzingaenzanisa mazwi ezvishomamwedzi gare gare. Zvisinei, zvinhu zvose zvino zvave zvashanduka, uye Google algorithm indices kuratidzira pane nzvimbo mukati memazuva. Uyezve, Google inoshandisaRankBrain, huchenjeri hunobatsira hunoita nehutano hwakanaka hwekufungidzira. Zvinoreva kuti mabhizinesi ane zvishoma kudzoratsvaga rankings. SEO inonyanya kushanda basa, uye vashandi vanogona kugadzirisa bhaari ye SEO kune dzimwe nzira dzekutengeserana dzedhijita dzakadai semagariro evanhu.
Ziva kufambidzana pakati pezvigadzirwa zvevanhu uye kugamuchirwa.
Panyaya iyi, vazhinji vanogara mahofisi vakagadzirirwa kumusoro nekuda kwekukurumidzira nekukurumidzaiyo sangano rehupfumi sezvinoitwa Snapchat uye Facebook rinoramba richikura. Icho chakanaka kune vanotora hote kuti vanzwisise zvakanakisisa zvemagariro evanhu kuti vashandise mu digitalmarketing. Zvichida, inofanirawo kuwedzera pakuwedzera SEO chiitiko. Nyanzvi dzinoratidza zvakare kuti vanogara mahofisi vanofanira kuisa mari mukugadzira mavhidhiyosezvo 67% yevashanyi vakarindira mararamiro anofambisa kufamba musati vashamba pakamuri. Mavhidhiyo anopawo vafambi vane pfungwa iri nani yekutendeseka.
Kubvuma Instagram ne Facebook.
Hazvibviri kuva pane imwe nheyo imwe yehupfumi, asi vashandi vekudyarainofanira kuva pane idzi mbiri. Vatsva vashandi vanotenderera pazvikwata izvi kuti vaone kana mumwe munhu hotera achiri kushanda mubasa rekupa.
Wedzera nhamba yevateveri.
Vakawanda vanoita zvokugadzira mahara havazivi vateveri vavo. Kuva nevafumi vashomanana vasingagonikukurudzira digital marketing mu hospitality industry.
Ipa mari yakatsaurirwa kumasangano evanhu.
Zvemagariro ehurumende inzvimbo inoda kuti hoteliers dzigadzire nekubhadhara nyanzvi.Vanofanira kuva nemafungiro ekunyora, kushambadzira, uye kuseka mukuwedzera kumapikicha uye unyanzvi hwokugadzira.